Ngamunye umkhiqizi ukukhishwa izibuyekezo software yayo, nabo bayajabula, futhi umshayeli. Ziyakwazi ezidingekayo ukuze operation esitebeleni of computer uqobo, okungukuthi yesistimu yokusebenza. Kufanele njalo ubuyekeze ngoba abashayeli ephelelwe yisikhathi Ungase futhi kuphele ukuqhuba noma ukukhombisa iphutha inqubo. Ngisho noma i-PC yakho iyasebenza stably, kuhlole ku inguqulo entsha kuyoba endaweni.
Ngakho, indlela yokubuyekeza umshayeli? Indlela onokwethenjelwa kunayo and qualitative - uye kuwebhusayithi nomkhiqizi bese thwebula manual. Nokho, lesi sisombululo ingenye okulengayo. Uhlelo Kumahhala umshayeli izibuyekezo kuyoba umngane okwamavila futhi ungafuni ukuya ikhasi elehlukile kule search for inguqulo entsha lokhu noma lokhuya.
Kanjani hlelo lusebenza? Isimiso wokusebenza iwukuba scan izinombolo ze-ID ye umshayeli ngamunye futhi abayitholayo database yayo. Uma inguqulo entsha - Umbuso indawo ingena esikhundleni. Esikhathini uhlu izinhlelo, kukhona abakhiqizi abaningi, ukuze bathole ngisho isofthiwe eziyivelakancane. Ngakho-ke, sibonga ozinikele isofthiwe umshayeli update kwi PC ngeke enensayo.
Uhlelo ayinakho version ikhokhwe kuka ukuheha kakade abasebenzisi. aphoyintimenti ngqo Umbuso indawo - isibuyekezo umshayeli ukuthi ukusebenzisa kusistimu yokusebenza "windose". Ukuthuthukiswa yaphela ngo-2008. unjiniyela omkhulu kwaba umbhali Russian A. Kuzyakov. Kwabaningi DriverPack - uhlelo kangcono umshayeli izibuyekezo. Lokhu kungenxa yokuthi ikwazi ukwenza update ngaphandle kokuxhumana kwe-intanethi. Siyabonga database ayo, okuyinto igcina zonke izinguqulo etholakalayo entsha abashayeli, kuba esitebeleni, futhi ukwehluleka kwenzeka kakhulu kuyaqabukela.
Ngaphezu efuna futhi esikhundleni izinhlelo atholakalayo, "DrayverPek" uyakwazi funa eliphezulu amakhodekhi futhi babanike umsebenzisi. Lena ngempela sici ewusizo.
Lolu hlelo update umshayeli (ngesiRashiya iyatholakala) ungaphakathi inethiwekhi yomthombo ovulekile. Ngenxa yalokhu, lapho ngokuvamile okuthiwa ukufaniswa, okuyizinto akuhlukile yasekuqaleni. Umehluko kuphela - banayo ezimbalwa ongakhetha entsha.
Nokho Lolu hlelo has bokwenza eziningi, nenhloso yayo ngqo ubhekana kahle. kuqala Uma uqalise uhlelo lokusebenza, sokucinga oku-othomathikhi isibuyekezo ezidingekayo. Lapho uhlu yakheke ngokuphelele, Umbuso indawo sikhombisa isimo umshayeli. Ngaphezu kwalokho, ukwabiwa a Driver ilungiselelo sichaze nendlela yokuzigwema ukuze ufake inguqulo entsha kusiza ukusheshisa futhi sithuthukise ukusebenza computer.
Ngeshwa, lolu hlelo lwe-Windows umshayeli buyekeza kokuthuthukisa entsha ye (kusuka 3.1), ngaphandle kokubuza umsebenzisi, usungula isethi ngezidingo. Lezi zihlanganisa izicelo ezifana iziphequluli zewebhu, kanye ambalwa amagciwane. Kugcine cishe azisongeli uhlelo kodwa ilimaze disc. Umshayeli esibonakalayo ukhuthaza abasebenzisi ukuthenga version ikhokhwe. Uma ingxoxo eningiliziwe ngaleli hlelo, singasho ukuthi yenziwa ngendlela yokuthi umuntu ozuza ilayisensi. Kubiza $ 10.
The best khulula Uhlelo ukuvuselela abashayeli - Doctor Kudivayisi. Ngeshwa, ayinayo version isiRashiya, kodwa esibonakalayo namanje esicacile. Lolu hlelo lokusebenza kalula kulolu hlu amathuluzi eliphezulu ukuthi enze umsebenzi wabo ku "hurray". Nokho, amanye amaphuzu namanje zidinga ukunakekelwa ezivela konjiniyela.
Yini ningahleli lolu hlelo? Kuleso, ngemva ebhalwe yokusesha umshayeli unpatched, inikeza izixhumanisi ukulanda ngesandla. Lena esingesihle. Ngaphezu kwalokho - isicelo akusho buyisela esimweni sokuqala computer. Kunoma ikuphi, ukugwema unstability ka "OSes" (bonke mhlawumbe) ukwenza kanjalo kwakuyomenza abe ukwakha ukubuyisela iphuzu futhi isimo yangaphambili ikhompyutha. Kufanele kuqashelwe ukuthi Kudivayisi uzinzile nhlobo "windose" kusukela XP 10.
Umshayeli uDetective - elula (siqala ikhokhwe) kanye nohlelo kangcono umshayeli izibuyekezo. Isithasiselo ubhekana imisebenzi yayo. Buhle version obugcwele ikhono ukulanda ngokuzenzakalelayo izibuyekezo.
Ikakhulukazi, kuyoba usizo ngemva ufaka "windose". Isicelo ngokwayo inquma nguqulo yesistimu yokusebenza, umthamo wayo. Umshayeli lithuthukise futhi kuthuthukisa kukhompyutha yakho ngokufaka abashayeli ezintsha. Konke liyadingeka kusuka umsebenzisi - chofoza inkinobho "Faka". Konke okunye kuyoba ngoba isicelo womuntu.
Ngokombono wabantu, singasho ukuthi zakamuva we-Windows, ngeshwa, hlelo ngezinye izikhathi uyayeka ukusebenza. Mhlawumbe ngoba namanje ngaphansi ukuthuthukiswa.
Esikhathini simo "Uhlelo Kuhle kakhulu umshayeli izibuyekezo" Lolu hlelo lokusebenza ngeke kube sekugcineni. Ingasetshenziselwa futhi ithemba ngokugcwele. Ngokungafani namanye amathuluzi amaningi, awusebenzi "iphahlazeka" ku inkumbulo, kodwa kuphela yokuzenzisa setha. Ukufaka abashayeli akadingi eziningi imithombo - kuphela uxhumano lwe-Inthanethi. 3DP izogxila isiqophi nekhadi umsindo. Phela, nabo basuke ungomunye yezingxenye ezibaluleke kakhulu uhlelo lokusebenza.
Lapho ufaka kungaba "inhlamba" unqulo wesi arab, siqaphela isicelo njengoba into ezibangelwa amagciwane. Kodwa ungalilahli ithemba ke ukubaluleka okukhulu. "Abavikeli Windose 'ngezinye izikhathi ngokungalungile ukuqopha ikhodi isicelo, ngenxa okuyinto kukhona inhlabamkhosi eyiphutha. Asikho isidingo sokuba amesabe, ngoba 3DP ihlolwe ngabasebenzisi abaningi.
Futhi zokugcina uhlelo kangcono ubuyekeza abashayeli - Driver Reviver. Izonikeza ukuskena njalo ukunikeza umsebenzisi izicelo fresh futhi egijima.
Ngezinye izikhathi kunamaphutha, ngenxa okuyinto kukhompyutha yakho ulandwa umshayeli elinegciwane. Le software uyakwazi ukubona sisuse, uma kunjalo wayefisa ngumsebenzisi. I interface kuyinto enembile, izinkinga yokusebenza musa kuphakama.
Umshayeli nokwethenjelwa wabonakalisa ngezimanga izinkampani eziningi okuholela zomhlaba, nakho bazincome. A semali isikhathi okungatholakala wachitha e ukufuna umshayeli ethize, isibonelo, isithwebuli noma iphrinta. Uhlelo bazokwazi ukuthole ngamaminithi ngokushesha ilandelwe PC.
Indlela ukuhlanza ithanga? Amathiphu ambalwa kusuka besifazane abanolwazi